Muuqaalka jilicsan ee jilicsan, cartoon 1410 online ah
Tikidhada jilicsan ee khatarta ah
Nolosha shakhsiyadeed ee dadka, waxaa jira dhacdooyin aan la xakameyn karin sida khiyaamo qaran oo jilicsan. Gabadha quruxda badan ayaa ka faa'iideysatay maqnaanshaha saaxiibteed, oo tagay tartamada kubada cagta. Wicitaanka saaxiibka gurigeeda si ay u sameeyaan shaqada guriga, waxay albaabka u gashey dharka jilicsan iyada oo la xiirtay laabta, iyagoo iska dhigaya in aysan diyaar u ahayn imaanshihiisa. Ninka ayaa xubin ka ahaa - ma xakameyn karin sariirta oo gacmaheeda ku riixday gabadheeda.
Ugu weyn > Hentay > Jilayaasha khatarta ah
Ka daawo jilicsanaanta khiyaanada internetka ee telefoonka gacanta